Paris gabadha Michael Jackson waxay ku abaalmarineysaa sawirro aan la shaacin - teles relay
11 sano kadib, luminta Michael Jackson wuxuu sii wadaa inuu abuuro faaruq farshaxan aad u weyn iyo qiiro qatar leh oo reerkiisa ah. Wuxuu ku dhintey 50 sano jir Los Angeles, gabadhiisa Paris, 11 jir waqtigaas, waxay aheyd naxdin. Hada wey kortay, wali waxay ku seexday aabeheeda.
Taxane dokumentiyo ah ayaa loo hibeeyay gabadha uu dhalay "Boqorka pop", Michael Jackson. Waxaa la soo daayay, waxaana lagu dhajiyay Facebook Watch waxayna muujineysaa jaceylka ay u qabto aabaheed.
Taxanahan taxanaha ah, waxaan ku aragnaa gabadha yar ee Paris oo aabbeheed la sheekaysaneysa. Wuxuu weydiinayaa waxay rabto inay sameyso goor dambe: "Maxaad sameyneysaa"ayay ku jawaabtay. "Maxaan sameeyaa ?", ayuu raaciyey Michael. "Qoob ka ciyaar oo hees". Dukumiintiga wuxuu ka kooban yahay dhowr sawir oo gaar ah oo Michael Jackson iyo gabadhiisa Paris.
Maanta, Moodel, jilaa iyo hees, muusikada Paris waxay horseed u tahay nolosha farshaxanimada sida lagu sharxay dokumentigan xaq u leh "Fududayn". Barteeda Instagram-ka, gabadha yari sidoo kale waxay qaadatay fursad ay ku abaalmariso aabaheed.
Waxay daaha ka qaadday dhowr sawir oo asal ah oo laga qaaday sawir qaadaha qoyska. Michael iyo howl wadeenadeeda intan ka badan, Michael oo wejiga sameeya oo dhoola cadeeya. Isku xigxiga shucuurta.
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https://afriqueshowbiz.com/michael-jackson-sa-fille-paris-lui-rend-hommage-avec-des-photos-inedites/
waa kuwan sawirada dumarka ay la wadaageen Davido kahor Chioma Rowland